Home > Products > LED Grow Light > Spyder LED Grow Light > အကောင်းဆုံး LED သည် Veg နှင့် Flower အတွက်အလင်းကြီးထွားစေသည်
ပုံစံ: MODEL S-8 BAR- SH SERIES
၁။ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ခြင်းအကောင်းဆုံး LED သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းများကိုအလင်းပေးသည်
ဤအကောင်းဆုံး LED သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အပွင့်အတွက်အလင်းကြီးထွားစေခြင်းမှာအမြင့်မားဆုံးသောအလင်းအဆင့်လိုအပ်သည့်ဆေးခြောက်ပင်များအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်ပုံမှန်ရောင်စဉ်ဖြစ်သည်။ ဆမ်ဆမ်အပြည့်အစုံကိုလက်ခံသည်။ ၎င်းသည် CELL ETL ဖြစ်ပြီးအစပြုသူအတွက်မဟုတ်ဘဲအမေရိကနှင့်ဥရောပဈေးကွက်မှကျွမ်းကျင်သောစိုက်ပျိုးသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အများကြီးတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မည်နှင့်ပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်၏တောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်ပေးလိမ့်မည်။
Product name: Best LED grow light for veg and flower Light distribution: 120 °
မော်ဒယ်နံပါတ်။: LION-GL720WHS4-08MD-020101 အပူစီမံခန့်ခွဲမှု: Passive
မီးအိမ်အရွယ်အစား: 1084*1110*128MM Max. ambient temp.: ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Light source: အယ်လ်အီးဒီ Function: 0-10V ဘူးသီးမှိန်
LED quantity: (8UV + 340W + 8R + 8FR) * 8 Mounting အမြင့်: မြတ်သောအထက် 15cm
LED brand: Epistar အိမ်အရောင်: Silver and red
Spectrum: ရောင်စဉ်အပြည့် Material: Alumnium
AC input power: 277V @ 720W IP rating: စိုစွတ်သောနေရာ
Amperage: 277V @ 2.26A Life time: >50000 hours
LED driver အမှတ်တံဆိပ်:4*200W Meanwell N. W .: 13 ကီလိုဂရမ်
PPF efficacy: 2.7 μmol / J ကို Warranty:5နှစ်
PPF: 1944 µmol/s Packing size: 115*28*22cm
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းပွင့်များအတွက်အကောင်းဆုံး LED ကြီးထွားလာသောအလင်းသည်စီးပွားဖြစ်အသုံးချမှုများအတွက်အမြင့်ဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။ အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖန်လုံအိမ်နှင့်မိုးလုံလေလုံဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးသောရောင်စဉ်သည်စက်ရုံကြီးထွားမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး passive cooling design သည်ဆူညံမှု၊ ပန်ကာများမအောင်မြင်ခြင်း၊ ထို့အပြင်၎င်းသည် superios PAR, PPF နှင့် PPFD များပို့လွှတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ LED ကြီးထွားလာသောမီးအိမ်များ၏အရည်အသွေးကိုအတောမသတ်အာရုံစိုက်ပါသည်။ ၀ င်လာသောကုန်ကြမ်းများအားလုံးကိုထုတ်လုပ်မှုမပြုမီ ၁၀၀% စစ်ဆေးရမည်။ ပထမနမူနာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီနှင့်အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးရမည်။ ၁၀၀% စစ်ဆေးမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။ veg နှင့်ပန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး LED ကြီးထွားလာသောအလင်းရောင်သည်အနည်းဆုံး ၈ နာရီအိုမင်းရခြင်းနှင့်အကြိမ်ပေါင်း ၅၀၀ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်မည်။ သုညချွတ်ယွင်းမှုသေချာစေရန်အထုပ်နှင့်တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ ၁၀၀% နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ပန်းများကိုအလင်းရောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသောအကောင်းဆုံးသော LED ၏အာမခံကာလသည် ၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းချွတ်ယွင်းသောနမူနာအမှာစာ (၂ ပီစီအောက်) မွာကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ASAP အစားထိုးခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချွတ်ယွင်းမှုများအတွက်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ အစားထိုးထုတ်ကုန်များကိုသင်နောက်တစ်သုတ်တွင်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းပို့မည်။
hot Tags:: Best LED Grow Light For Veg And Flower, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Buy, Factory, Customized, Made in China, Free Sample, Price List, Advanced, Fashion, Quality